आज चैत २३ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल! जय पाथीभरा लेखेर भाग्य हेर्नू होस !:: Mero Desh
आज चैत २३ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल! जय पाथीभरा लेखेर भाग्य हेर्नू होस !
Published on: २३ चैत्र २०७७, सोमबार ०२:५१
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) विद्यामा कमजोरी र लेन देनमा विवाद होला । विगतका समस्या बल्झिन सक्छन् । सानातिना काम र घरेलु समस्या देखापर्ला रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । पुरुषार्थद्वारा अ’धिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । प्र’तिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ । ॐ
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) कामको सन्दर्भमा वि’शिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । कला, साहित्य मनोरञ्ज न आदि क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । समयमा चिताएको काम सम्पादन नहुन सक्छ !आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । मेहनत अनुसार फाइदा कमै होला जय पाथीभरा
मिथुन (का, की, कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । कामको चापबाट पनि फुर्सद पाइनेछ । सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । मनमा डर लागे पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् बोलीको प्र’भाव पनि बढ्नेछ । ठीक समयमा सही ‘निर्णय लिन सकिनेछ ।
कर्कट (ही, हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) अरूका काममा समय बित्न सक्छ । उपलब्धि प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । काम पूरा नहुनाले मन खिन्न रहनेछ आफन्त तथा नजिक का साथीभाइ टाढिन सक्छन् । अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने परिस्थिति आफ्ना लागि अलि प्र’ति कूल बन्न सक्छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा, टी,टू, टे) प्र’यत्न गर्दा मौकाको फाइदा उठाउन सकिएला सवारी साधन चलाउँदा साव धानी अपनाउनु होला दी’र्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ । विशेष सभा समारोहमा भाग लिने मौका प्राप्त हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई वि’शेष फाइदा होला । रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ । व्यापार लगायत आ’र्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अ’वरोध ‘पुर्याउन सक्छ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) परिवारजनको साथले काम मा उत्साह जगाउनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमय बन्नेछ श्र’द्धा र परोपकारमा मन जाने छ । स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ । सानातिना काममा अल्झनुपर्दा मुख्य काममा अवरोध हुन सक्छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अस्वस्थताका बाबजुद कामको दायित्व बढ्नेछ । सानातिना काममा म’हत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । अस्वस्थताले चिन्ता र काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ ! अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला यात्रा को पनि समय छ अतिथिका रूपमा सम्मान समेत पाइए ला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) राम्रै आम्दानी हुने रोज गारीको अवसर मिल्न सक्छ । बेसुरमा अरूलाई दिएको बचनले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा प्र’गति गर्न नसकिने र व्यापारमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनुहोला
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी)व्यापा रमा मनग्य फाइदा हुनेछ भने आँटेका काम तत्काल सम्पा दन हुनेछन् पछिसम्म लाभ हुने काममा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) अ’नावश्यक भ्रमण हुन सक्छ !स्वास्थ्यगत समस्याले पनि सताउने देखिन्छ उपचार मा खर्च हुने योग छ । मेहनत गर्दा राम्रै प्र’तिफल प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूले काममा उत्साह जगाउनेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सहयोगको आशा देखाउ नेहरूले धोका दिन सक्छन्, सचेत रहनुहोस् ।व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ प्र’तिस्पर्धीलाई पनि पछि पार्न सकिनेछ । कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिएला ।